“လူ ကြားလို့တောင် မကောင်းတဲ့ အဖြစ်” | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Photography » “လူ ကြားလို့တောင် မကောင်းတဲ့ အဖြစ်”	17
Posted by ရဲစည် on Jun 28, 2012 in Photography | 17 comments
တော်ပါပီဗျာ ပိုက်ဆံလေးစုပီး အမှိုက်ဖောင်ဒေးရှင်းတောင် ထောင်ရမလိုဖြစ်နေပီ….. About ရဲစည်
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်တယ်။ အတ္တကြီးတယ် လက်ညှိုးများများထိုးပီး လက်မနည်းနည်းထောင်တယ်။ ဒါကြောင့် လူအံဝင်ခွင်ကျမှု အဆင့်အတန်းမှာ နည်းနည်းနိမ့်ကျတယ်...။
View all posts by ရဲစည် →	Blog
ဦးဦးပါလေရာ says: လက်ငင်း လတ်တလောအတွက်တော့ စံနစ်ကို ပြင်ရမှာပဲ..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 867
ရဲစည် says: အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ အဓိကအကျဆုံး ပြောရရင်
may flowers says: အင်း………..တို့နိုင်ငံလည်း အခြေခံစိတ်ဓါတ်တွေကအစ ပြုပြင်ဖို့အများကြီးလိုသေးတာနော်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2171
TNA says: အင်း အမှိုက်နှင့်မြန်မာ မြန်မာနှင့်အမှိုက် ခွဲမရပါတကား။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2748
နေ၀န်းနီ says: အင်း အမှိုက်နှင့်မြန်မာ မြန်မာနှင့်အမှိုက် ခွဲမရပါတကား။ ဆိုတော့ကာ အမှိုက်=မြန်မာ မြန်မာ =အမှိုက် ဟီးးးးးးး :P ကော်မန့် ရေးတဲ့ နေ၀န်းနီလည်းအမှိုက် ……………… လည်းအမှိုက်..။ …………လည်း အမှိုက်….။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2721
kyeemite says: ကိုရဲစည်ရေ..အကျိုးပြုပို့စ်လေးအတွက်
မောင်ပေ says: ဒီကနေ့ပစ်မယ်ဆိုတဲ့ အမှိုက်အတွက် တာဝန်ယူပေးချင်လို့….
Nyein Nyein says: လူတွေကလည်း စည်းကမ်းမလိုက်နာ၊ တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း ပေါ့လျော့ဆိုတော့ ဒီပြဿနာက မပြီးနိုင်ဖြစ်နေတာပါ။ ငြိမ်းတို့နားက ဈေးမှာဆိုရင် အမှိုက်ကန်ရှိပါတယ်။ စည်ပင်ကလည်း ညဆိုလာသိမ်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမှိုက်မပစ်ရဆိုတဲ့နေရာမှာ လူတွေအမှိုက်ပစ်ကြတယ်။ အမှိုက်တွေလာရှင်းတော့မှ ” အမှိုက်မပစ်ရ ” ဆိုတဲ့ ဆိုင်းပုဒ်လေးပေါ်လာတယ်။ နောက်ပြီး ကွမ်းစားပြီးနေရာတကာ လျှောက်ထွေးတဲ့ ကိစ္စလည်းရှိပါသေးတယ်။ ကွမ်းမထွေးရဆိုတဲ့ ဆိုင်းပုဒ်ပေါ်မှာ ကွမ်းတံထွေးတွေချည်းပဲ။ အမှန်ဆို နည်းနည်းလေးတွေးကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဖြစ်အောင် လုပ်သင့်တယ်။ ကိုရဲစည်ပြောသလို စည်းချက်ညီညီနဲ့လုပ်ကြရင် အဲဒီ့ပြဿနာတွေက အမြန်ဆုံးပြေလည်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
mamanoyar says: သူ့အခန်းက အမှိုက်တောင် ကြုံကြွားလုပ်လိုက်သေးတယ်
ကြည်ဆောင်း says: ရန်ကုန်ကလူတွေက တိုက်ခန်းနဲ့နေရတာ အများစုလေ၊ အမှိုက်လှည်းလာမှပြစ်ရတာများပါတယ်၊ အမှိုက်လှည်းကလဲ ပုံမှန်မလာ ၊ လာရင်လဲ ထွက်ခါနီးမှ ခေါင်းလောင်းတီး ၊ ခြောက်လွှာပေါ်က ပြေးဆင်း ( ဒါတောင်အမှိုက်ထုပ်ကိုသေချာထုတ်ပြီးလူရှိအကုန် အမှိုက်လှည်းလာမှာကို ရည်းစားမျှော်တာထက် လွန်အောင်မျှော်) ထွက်သွားတဲ့ လှည်းနောက်ကပြေးလိုက်၊ တစ်ခါတစ်လေ အမှိုက်ပစ်ရတာ ရပ်ကွက်တောင် တစ်ပါတ်လောက်ပါတ်မိ။ လူလား. …. ၊စနစ်လား …… ၊ ခြောက်လွှာက တိုက်ခန်းမှာ နေမိတဲ့ ကိုယ့်အပြစ်လား…..။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 90
သစ် တည် says: တရုပ်ပြည်မှာတောင် အမိူက်ပုံးလုံလောက်အောင်မရှိဘူး
နွေဦး says: လူတွေ တန်ဖိုးမရှိ လို့ ဒီလို စည်းကမ်းမရှိတာလား..
Khaing Khaing says: ကိုရဲစည် အခန်းထဲကအမှိုက်ပုံက ဒါ့ပုံရိုက်ခါနီး သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးစီထားတာလား ……
ရဲစည် says: မဟုတ်ရပါဘူး မခိုင်ရယ်
မမ အညာသူ says: အမိုက်တွေကိုစည်းကမ်းမဲ့ပစ်တာတကယ်ကိုမကောင်းတဲ့အကျင့်ပါ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1719
မွန်မွန် says: အထပ်မြင့်မှာနေတဲ့သူတွေက အမှိုက်ဆင်းမပစ်ချင်ကြတာလည်း ပါတာပေါ့လေ…။ မွန်မွန်တို့ဆို တစ်ရက်ခြားတစ်ခါ အလှည့်နဲ့ ဆင်းကြတာတောင် အပျင်းထူချင်သား..ဒါတောင် အိမ်ရှေ့တင် ပုံထားလိုက်လို့ရတာကို… ဆယ်နာရီလောက် ဆင်းပစ်လိုက်ရင် ဆယ့်တစ်နာရီလောက်ဆို လာသိမ်းပြီ…
snow white says: စနိုးတို့တိုက်မှာ ရှေ့လက စပြောထားတယ်တိုက်ပေါ်မှအမှိုက်ပစ်ရင် ဒဏ်ငွေ10000တဲ့မိလားဆိုတော့လည်း တိုက်အောက်မှာသာအမှိုက်ပုံဖြစ်သွားတယ် မည်သည့်တိုက်ခန်းမှ ဒဏ်ငွေ10000ဆောင်လိုက်ရတယ်ဆိုတာမကြားမိလိုက်ပါဘူး။
Comments By Postသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - Ma Ei - pazflorမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - Foreign Resident - ko pauk mandalayစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - kai - pazflor“ရှေးရှေးက ဆင်ဖြူရှင်မနန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးကောင်းမှူ့ အခုမှာတော့ကျောင်းအိုအို” -etoneအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - pazflor - ဦးဦးပါလေရာ``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - မင်းမင်း - kyeemiteမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - ko pauk mandalay - padonmarSakura Tower5ထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ J-SAT အမည်၇ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ -etoneအတု - kyeemite - Munetezလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - Ma Ei - weiweiမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ - may july - အလင်း ဆက်“သဘာဝအလွမ်းမင်းသားကြီး (ဦးကြင်ဥ)” ရှေးကဗျာများပြန်လည်ကူးယူဖ်ာထုတ်ခြင်း အမှတ် (၈) - ko pauk mandalay - ko pauk mandalayComment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - Foreign Residentဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့..... - rain pricess - မောင် ပေအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - may july - ရဲစည်နောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - ကထူးဆန်း - Ei Kyipyarသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - kaiဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - awra-cho - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးရွာသူ/သားများ အတွက် - awra-cho - Munetezမကြာမီအချိန်အတွင်း ကမ္ဘာ့ပတ်လမ်းကြောင်းထဲ၌ ဂြိုဟ်တုများ လောင်စာဖြည့်တင်းနိုင်တော့မည်လော - မင်းမင်းပြင်းထန်သော အဆုတ်ရောဂါကို ကုသနိုင်မည့် နာနိုဆေးပညာ - မင်းမင်း - Ma Maရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - weiwei - ရွှေတိုက်စိုးEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities